Iindaba -Itawuli yokuhlamba eyomileyo okanye itawuli yokuhlamba yomqhaphu ebhetele
Yeyiphi engcono, yokumisa ngokukhawuleza itawuli yokuhlamba okanye itawuli yokucoceka yomqhaphu? Ithawula lokuhlamba elomileyo ngokukhawuleza yimveliso yetawuli eyenziwe ngeentsinga ezibalaseleyo, ezinokumiswa ngokukhawuleza kwaye zinokufakwa kakuhle kwamanzi kunye neepropathi zokuhambisa amanzi. Iitawuli zokuhlamba zihlala zisetyenziswa kwiihotele nakwizindlu zeendwendwe. Umgaqo wetawuli yokuhlambela ekhawulezileyo umiselwa bubume obukhethekileyo bethawula elomileyo lokuhlamba. Ifayibha yethawula lokuhlamba elomileyo ngokukhawuleza lamkela itekhnoloji ye-petal e-orenji eqhubela phambili, eyonyusa kakhulu umsantsa we-capillary wetawuli yokuhlambela, ngaloo ndlela iphakamisa ukufunxwa kwamanzi kwetawuli yokuhlamba. Ke ngoko, iitawuli zokuhlamba ezomileyo ziluncedo kakhulu.
Iitawuli zokuhlamba ezomisa ngokukhawuleza zinokufunxa ukufuma emzimbeni ngokukhawuleza, emva koko zibeke elangeni ukuba zome malunga nemizuzu elishumi, ezilungele kakhulu. Kwangelo xesha, itawuli yokuhlambela ekhawulezayo inomsebenzi olungileyo, intuthuzelo, ukuthamba, umhombiso olungileyo, kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu, ezifanelekileyo kakhulu ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Iitawuli zokuhlamba ezomileyo zikulungele kakhulu ukuzicoca. Ngokuqhelekileyo bathatha ubumdaka phakathi kwemicu (kunokuba ngaphakathi ngaphakathi kwimicu). Ukongeza, ifayibha inokucoceka okuphezulu kunye noxinano oluphezulu, ke inamandla okukhangisa kwintengiso. Emva kokusetyenziswa, kuphela ngamanzi acocekileyo okanye ukuhlanjwa okuncinci Iarhente inokucocwa.
Yeyiphi engcono, yokumisa ngokukhawuleza itawuli yokuhlamba okanye itawuli yokucoceka yomqhaphu?
1. Iitawuli ezihlambulukileyo zomqhaphu zezona taulo ziqhelekileyo zokuhlamba kwimarike, zihlala zinezikhewu ezinkulu. Emva kokuhlamba, zihlala zifuna ukomiswa usuku. Iitawuli zokuhlamba ezomileyo ziyaziwa ngokumisa ngokukhawuleza. Olona phawu lubalulekileyo kukuba banokuma ngokukhawuleza emva kokusetyenziswa, okulungele ukusetyenziswa okulandelayo.
2. Xa kusetyenziswa iitawuli ezihlambulukileyo zomqhaphu, ngakumbi iitawuli zokuhlamba ifayibha yendalo, uthuli, igrisi, ubumdaka, njl. Kumphezulu wento eza kusulwa ifakwa ngqo kwifayibha. Emva kokusetyenziswa, ihlala ifayibha kwaye akukho lula ukuyisusa. Emva kwexesha elide kunokuba nzima nokuba kuphulukane nokomelela, okuya kuchaphazela ukusetyenziswa kwesiqhelo kwixa elizayo. Nangona kunjalo, itawuli yokuhlambela ekhawulezayo ifunxa ubumdaka phakathi kweentsinga (hayi ngaphakathi kwimicu). Ukongeza, ifayibha inokucoceka okuphezulu kunye nokuxinana okuphezulu, ke inamandla okukhangisa ngamandla. Emva kokuyisebenzisa, ifuna kuphela ukucocwa ngamanzi okanye isepha encinci.
3. Ubomi benkonzo yeetawuli ezomileyo ezikhawulezayo kunye neetawuli zokuhlamba zebhaskiti ezimsulwa zahlukile. Ngokwesiqhelo iitawuli zokuhlamba ezomileyo ngokukhawuleza zinempawu zamandla aphezulu kunye nobukhali obomeleleyo, ke ubomi babo benkonzo bunokufikelela ngaphezulu kwamaxesha ama-4 obomi benkonzo yeetawuli eziqhelekileyo zokuhlamba. Ayikhubekanga. Kodwa iitawuli ezihlambulukileyo zomqhaphu azinakufezekisa oku.